नेपालमा कोरोनाबाट कुन उमेर समूहका व्यक्तिको मृत्युुदर बढी ? - Morning Bell
नेपालमा कोरोनाबाट कुन उमेर समूहका व्यक्तिको मृत्युुदर बढी ?
Reporter	काठमाडौं	कात्तिक १, २०७७
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा बृद्धावस्थाका व्यक्तिको मृत्युदर बढी देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार मृत्यु हुनेमा ६१ देखि ७० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको हो।
१ कात्तिक २०७७, शनिवार ०९:४६ बजे प्रकाशित
आजदेखि भित्रियो दशैं, घटस्थापनाको शुभसाइत बिहान ११ बजेर ४६ मिनेटमा
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री चौधरीलाई कोरोना संक्रमण